ကောလိပ်မှသည်ညာဘက် Way ကိုငွေထုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ကျောင်းသားများ & မိဘများအဘို့ ပညာရှင်များ
သငျသညျဖို့ခကျခဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုပါက ကောလိပ်ကျောင်းကနေဆုတ်ခွာ , သင်သေချာသငျသညျတတ်နိုင်သမျှနီးနီးကပ်ကပ်လိုအပ်သောခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာစေသင့်ပါတယ်။ နည်းမှန်လမ်းမှန်ကချဉ်းကပ်အနာဂတျတှငျသငျသညျခေါင်းကိုက်ကယ်တင်မည်။
သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီပြီးတာနဲ့, သင့်စိတ်ထဲပေါ်ပထမဦးဆုံးအရာရိုးရှင်းစွာကွာကျောင်းဝင်းထဲကနေရဖွယ်ရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သို့သော်လည်းလျင်မြန်စွာရွေ့လျားသို့မဟုတ်အနည်းငယ်အရေးကြီးသောတာဝန်များကိုလုပ်ဖို့မေ့အကုန်အကျများနှင့်ထိခိုက်နှစ်ဦးစလုံးသကျသပွေနိုငျသညျ။
လူတစ်ဦးအတွက် - ပထမမှတ်တိုင်သင့်ရဲ့ပညာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အခြေစိုက်စခန်းထိဖြစ်သင့်သည်။ ဒါကြောင့်ဖုန်းကိုကျော်ကသူတို့ကိုပြောပြရန်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပေးပို့ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူထင်သော်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဒီလိုမျိုးတစ်ဦးအတွက်လူတစ်ဦးစကားလက်ဆုံအချက်ကိုခိုင်လုံမှု။
ဒါကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်လိမ့်မည်နည်း ဖြစ်နိုင်စရာ။ သို့သော်မျက်နှာ-to-မျက်နှာစကားပြောဆိုမှုနောက်ပိုင်းတွင်သင်အမှားနာရီကိုကယျတငျနိုငျရှိခြင်းမိနစ် 20 ဖြုန်း။ သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့အကြံပေးစကားပြောနှင့်သင့်အဖွဲ့အစည်းကိုသင်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ချင်ပါတယ်သိစေရန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အသေးစိတ်အတိအကျနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းပါ။
သင့်ရဲ့ဆုတ်ခွာ၏တရားဝင်နေ့စွဲဖွယ်ရှိသင့်ရဲ့ငွေကြေးအပေါ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်စောစောစာသင်အတွက်ရုပ်သိမ်းပေးရန်, လျှင်, သင်အားလုံးသို့မဟုတ်သင်သင့်ကျောင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အထဲကယူကိုမဆိုကျောင်းသားချေးငွေများ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုပြန်ဆပ်ဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်မည်သည့်ပညာသင်ဆုရန်ပုံငွေ, ထောက်ပံ့ငွေ, သို့မဟုတ်အခြား Moni အကျိုးကိုခံရဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
သင်စာသင်နှောင်းပိုင်း (r) ရုပ်သိမ်းပေးရန်လျှင်, သင်၏ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်လိမ့်မည်။ အကျိုးဆက်ပြောနေတာ - နောက်တဖန်, လူတစ်ဦးအတွက် - ရုပ်သိမ်းပေးရန်ရန်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီရုံးအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးစမတ်, ပိုက်ဆံချွေတာဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်သငျသညျပုဂ်ဂိုလျတစျဦးရှိမည်မျှပြောဆိုမှုများ၏, သင်ဖွယ်ရှိတရားဝင်နှင့်ဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာ၏တရားဝင်နေ့စွဲအဘို့သင့်အကြောင်းပြချက်နှင့် ပတ်သက်. ရေးသားခြင်းအတွက်တစ်ခုခုတင်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်မယ့်ရုံးကိုလည်းသင်သည်သင်၏ဆုတ်ခွာပြီးပြည့်စုံစေရန်စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်အခြားပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်မယ့်ရုံးကိုလည်းများသောအားဖြင့်ကတည်းက မှတ်တမ်းကိုင်တွယ် , သင်အရာအားလုံးကိုသူတို့နှငျ့အတူအစွန်အဖျား-ထိပ်တန်းပုံသဏ္ဍာန်၌တည်ရှိ၏သေချာစေချင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကျောကျောင်းကိုသွားသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအလုပ်လျှောက်ထားကြသည်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဖြစ်မှန်အတွက်, သငျသညျရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကမရခဲ့ပါဘူးအခါ, ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့,, သင်သည်သင်၏မှတ်တမ်းသင်သည်သင်၏သင်တန်းများပျက်ကွက်သောဤဝေါဟာရကိုကိုပြသချင်ကြပါဘူး အချိန်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးဆုတ်ခွာစာရွက်စာတမ်း။
သငျသညျကျောင်းဝင်းနေထိုင်နေတယ်ဆိုရင်, သင်အိုးအိမ်ရုံးရုပ်သိမ်းပေးရန်ရန်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သင်ကသင့်အခန်းကိုသန့်ရှင်းရှိခြင်းများအတွက်မည်သည့်အဖိုးအခများပေးချေရန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်များအတွက်တရားစွဲဆိုနှင့်သင်သည်သင်၏အမှုအရာမှထွက်ပြောင်းရွှေ့ရှိသင့်သည့်အခါများကပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့ထွက်တွက်ဆဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
သင်တိုက်ရိုက်အိုးအိမ်ရုံးသို့၎င်းလွဲသွားစေသင့်တဲ့အခါမှာဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ RA ရန်သင့်သော့ပေးအပ်ရိုးရှင်းစွာကြောင့်အခကြေးငွေသို့မဟုတ်အပိုဆောင်းအိမ်ရာကုန်ကျစရိတ်မဆိုကြင်နာတရားစွဲဆိုခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူး။
အဆိုပါ Alumni Office ကိုစကားပြော
သင်တစ်ဦး alumnus ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေဘွဲ့ရမှမရှိကြပါဘူး။ သင်တစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့လျှင်, သင် (အများဆုံးမကြာခဏ) နေကာ alumnus နှင့်၎င်းတို့၏ကျောင်းသားဟောင်းများရုံးကတဆင့်န်ဆောင်မှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဆင်ခြင်၏။ အကျိုးဆက်ကြောင့်ယခုရီစရာဖြစ်ပုံရသည်ကိုပင်လျှင်, သင်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ရှေ့ရပ်တန့်ဖို့သေချာပါစေ။
သင်တစ်ဦး forwarding ကိုလိပ်စာထားခဲ့ပါနှင့်ထံမှအရာအားလုံးအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရနိုင် အလုပ်အကိုင်နေရာချထားန်ဆောင်မှုများ (လျှော့ကျန်းမာရေးအာမခံနှုန်းထားများလိုမျိုး) ကျောင်းသားဟောင်းများအကြိုးကြေးဇူးမြားရန်။ သင်တစ်ဦးဒီဂရီမပါဘဲကျောင်းကိုစွန့်ခွာနေရင်တောင်, သင်ဆဲရှိရပ်ရွာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်သင့်အဖွဲ့အစည်းနေဆဲသင့်ရဲ့အနာဂတ်ကြိုးပမ်းထောကျပံ့ပေးနိုငျပုံအကြောင်းကိုတတ်နိုင်သမျှအသိပေးအဖြစ်စွန့်ခွာသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကောလိပ်ဗိုလ်မှူး Choose လုပ်နည်း
တစ်ကောလိပ်သင်တန်း Pass ကို / ကျရှုံးခြင်းကိုယူမှရတဲ့အခါ
ဘယ်လိုကောလိပ်ပညာရှင်များ High School တွင်ထံမှကွဲပြားခြားနားရှိပါသလဲ
သင်ကလယ် Failed င့်ပြီးနောက် Recover လုပ်နည်း
သင်ကအလှမယ်အတန်းအစား အကယ်. ကောလိပ်မှာဘာလုပ်ပါရန်
သင်ကတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး9အကောင်းဆုံးဂီတတူရိယာ
UNC မှ Charlotte အဆင့်လက်ခံရေး
အဆိုပါ "လှည်" ကဗျာ: "မယူအဆိုပါလမ်းမကြီး" ရောဘတ် Frost ကယ့်ရန်လမ်းညွှန်
Hollins တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
'' အဆိုပါခံခဲ့ခြေ '' အက္ခရာလေ့လာမှု: သိက္ခာယောဟနျသ Hale က
အီတလီကြိယာ Dormire များအတွက် conjugation ဇယား
သိပ္ပံ Ice Cream ချက်ပြုတ်နည်း
Tenor Fächer: သင် operatic tenor ၏အဘယျကြင်နာရှိပါသလဲ
အညွှန်းကိန်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း: နက်ရှိုင်းသောအချိန်ပြောပြရန် Key ကို
ချာလီ Axel ဝုဒ်ကိုယ်ရေးဖိုင်
Estados UNIDO en ဗီဇာ eb-5 မသန်စွမ်း inversionistas (အစိမ်းရောင်ကဒ်)
ယင်းဇင် Koan တစ်ခုနိဒါန်း
ဘယ်အချိန်မှာ Scuba ရေငုပ်မြင်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်စေအချက်များ
ဗုဒ္ဓ၏သွေ့ခြောက်သောအရိုး - သေ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ
အာကာသ Chimps နှင့်အာကာသအတွင်း၎င်းတို့၏သမိုင်း
မြင်း Poker Game က Play လုပ်နည်း - မြင်း Poker ဂိမ်းစည်းကမ်းများ